Bit By Bit - agba nwere - eme
[ , ] Berinsky na ndị ọrụ ibe (2012) atụle MTurk na akụkụ site na nyochaghachi atọ nyocha. Na - emepụta ụdị ọrịa Asia na - emepụta site na Tversky and Kahneman (1981) . Ndi nsonaazụ gị na Tversky na Kahneman si? Ndi nsonaazụ gị na ndị Berinsky na ndị ọrụ ibe gị? Kedu ihe-ọ bụrụ na ihe ọbụla-nke a na-akụziri anyị gbasara iji MTurk maka nnyocha nyocha?
[ , ] N'akwụkwọ edemede dị mkpirikpi nke isiokwu ya bụ "Anyị Kwesịrị Ịkwụsị," onye otu ọkà mmụta ihe gbasara mmekọrịta ọha mmadụ bụ Robert Cialdini, otu n'ime ndị edemede Schultz et al. (2007) , dere na ọ na-atụsi ụra n'isi ọrụ ya dị ka prọfesọ, n'akụkụ ụfọdụ n'ihi nsogbu ndị o chere ihu n'ịmepụta ule n'ọzụzụ (nkà mmụta uche) nke na-emekarị nyocha ụlọ (Cialdini 2009) . Gụọ akwụkwọ Cialdini, ma deere ya ozi email na-agba ya ume ka ọ tụgharịa uche ya maka ohere nke nyocha nke dijitalụ. Jiri ihe omuma atu di iche iche nke nyocha nke nekwu okwu ya.
[ ] Iji chọpụta ma ọ bụrụ na obere ihe ịga nke ọma na-emechi ma ọ bụ na-apụ n'anya, van de Rijt na ndị ọrụ ibe (2014) abanye n'ime usoro anọ dị iche iche na-enye ihe ịga nke ọma na ndị a họọrọ na-enweghị usoro, wee tụọ mmetụta dị ogologo nke mmeri a. Ị nwere ike iche maka usoro ndị ọzọ ị nwere ike ịnweta ụdị ihe ahụ? Nyochaa usoro ndị a n'ihe gbasara okwu sayensị, algorithmic mgbagwoju anya (lee isi 2), na ụkpụrụ omume.
[ , ] Ihe si na nnwale nwere ike ịdabere na ndị so na ya. Mepụta ọmịiko ma jiri ya rụọ ọrụ na MTurk na-eji usoro izu abụọ dị iche iche. Gbalịa bulie nnwale na mbanye azum ka ga-arụpụta ga-abụ dị ka dị iche iche dị ka o kwere. Dịka ọmụmaatụ, usoro mgbapụta gị nwere ike ịbata ndị nabatara ụtụtụ na mgbede ma ọ bụ iji kwụọ ụgwọ ndị na-arụ ọrụ na ụgwọ dị elu ma dị ala. Ụdị dịgasị iche iche a na-arụ na atụmatụ mkpara nwere ike iduga na ọdọ mmiri dị iche iche nke ndị na-esote na ụzọ nchọpụta dị iche iche. Kedu ihe dị iche iche si pụta? Kedu ihe nke a na-ekpughe banyere ịgba ọsọ na MTurk?
[ , , Cheedị na ị na-eme atụmatụ nyocha nke Emotional Contagion (Kramer, Guillory, and Hancock 2014) . Jiri ihe si na Kramer (2012) mee nchọpụta nke mbụ iji kpebie ọnụọgụ nke ndị ọ bụla nọ n'ọnọdụ ọ bụla. Ihe ọmụmụ abụọ a adabaghị n'ụzọ zuru oke ma jide n'aka na ị depụtara echiche niile ị na-eme n'ụzọ doro anya:
Gaa na nyocha nke ga-ekpebi mmadụ ole ga - achọ ka ha nwee ike ịchọpụta mmetụta dị oke ka mmetụta dị na Kramer (2012) na \_(\_alpha = 0.05\_) na \_(1 - \_beta = 0.8\_) .
Mee otu ihe ahụ nyocha.
Nyere nsonaazụ si Kramer (2012) bụ Contagion Emotional (Kramer, Guillory, and Hancock 2014) na-agbanyeghị ike (ya bụ, ọ nwere ọtụtụ ndị na-etinye ya karịa mkpa)?
N'ime echiche ndị ị mere, nke nwere mmetụta kachasị na ngụkọta gị?
[ , , Zaa ajụjụ mbụ, ma oge a kama iji akwụkwọ ọmụmụ ihe nleta nke Kramer (2012) mee ihe, jiri nsonaazụ sitere n'aka Lorenzo Coviello et al. (2014) .
[ ] Ma Margetts et al. (2011) na van de Rijt et al. (2014) eme nnyocha ndị na-amụ usoro nke ndị mmadụ na-edebanye akwụkwọ arịrịọ. Jiri ya tụnyere atụmatụ na nchọpụta nke ọmụmụ ndị a.
[ ] Dwyer, Maki, and Rothman (2015) duziri nyocha abụọ sitere na ntanetị n'etiti mmekọrịta mmadụ na omume na gburugburu ebe obibi. Nke a bụ ihe odide nke akwụkwọ ha:
"Olee otú a pụrụ isi jiri nkà mmụta sayensị mee ihe iji kwalite omume nke ụwa? N'ime omumu abuo, mmekorita di iche iche iji kwalite omume onodu nchekwa ume n'ime ulo ocha ndi mmadu na-enyocha mmetuta nke ihe omuma ihe na oru onwe onye. Na Ọmụmụ nke 1, a na-eme ka ìhè dị (ntụgharị, ma ọ bụ gbanyụọ) ma ọ bụ tupu mmadụ abanye n'ime ụlọ ịsa ahụ ọha na eze na-adịghị anọkarị, na-egosi akara ngosi maka ọnọdụ ahụ. Ndị na-eso ya nwere ike ịgbanye ọkụ ma ọ bụrụ na ha apụ mgbe ha banyere. Na Ọmụmụ nke 2, a gbakwunyere ọnọdụ ọzọ na nke a na-egosipụta ụkpụrụ nke ịgbanyụ ìhè ahụ site na ndị na-arụkọ ọrụ ọnụ, mana ndị na-eso ha abụghị ndị ọrụ maka ịgbanwuo ya. Ibu ọrụ onwe onye na-eduzi mmetụta nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya na omume; mgbe ndị na-eso ụzọ enweghị ọrụ maka ịgbanwuo ìhè ahụ, mmetụta nke ụkpụrụ ahụ belata. Nsonaazụ ndị a na-egosi otú usoro nkọwa na ọrụ onwe onye nwere ike isi gbanwee ịdị irè nke usoro mmepụta ihe. "
Gua akwukwo ha ma weputa ihe omumu nke 1.
[ , ] Iwuli na ajụjụ gara aga, ugbu a, mepụta atụmatụ gị.
Kedu ka esi arụpụta ya?
Gịnị nwere ike ịkọwa ọdịiche ndị a?
[ ] E nwere ọtụtụ arụmụka banyere nnwale ndị na-eji ndị nnọkọ a na-akpọ MTurk. N'ikwekọ, enwere arụmụka dị ukwuu gbasara nnwale ndị na-eji ndị gụrụ akwụkwọ na-amụrụ ụmụ akwụkwọ. Dee ederede abụọ na-atụle na icheiche ndị Turkers na ndị na-enweghị mmụta dịka ndị nyocha. Ntụle gị kwesịrị ịgụnye mkparịta ụka nke okwu abụọ sayensị na nke akụkọ.
[ ] Jim Manzi akwụkwọ Uncontrolled (2012) bụ mmalite dị ebube nke ike nke experimentation na azụmahịa. N'akwụkwọ ahụ ọ kọọrọ akụkọ na-esonụ:
"M na-enwe otu nzukọ na ezigbo onye ọrụ azụmahịa, onye na-eme onwe ya bụ onye na-arụ ọrụ ego nke nwere onwe ya, nke nwere mmetụta miri emi, nke na-emetụbeghị nke ike nke ịnwale. Ụlọ ọrụ ya nwere nnukwu ego na-agbalị ịmepụta nnukwu ngosipụta ngosipụta nke ụlọ ahịa nke ga-adọta ndị na-azụ ahịa ma mee ka ahịa dịwanye elu, dịka amamihe dị na ya kwuru na ha kwesịrị. Ndị ọkachamara jiri nlezianya nyochaa ebumnuche mgbe e mepụtara, na nyocha nke nyocha nke onye ọ bụla n'ime afọ ole na ole gara n'ihu na-egosi enweghị mmetụta ọhụụ ọhụụ nke ọhụụ ọhụụ ọ bụla na ahịa. Ndị isi ahịa na ndị ahịa na-ezute CEO iji nyochaa nyocha ndị a na-eme n'akụkọ ihe mere eme na ọbara. Mgbe ha gosipụtasịrị ihe omimi ahụ nile, ha kwubiri na amamihe ndị dị na ya ezighi ezi-na ngosipụta windo anaghị achụpụ ahịa. Ihe ha tụrụ aro bụ iji belata ụgwọ na mgbalị na mpaghara a. Nke a gosipụtara n'ụzọ dị ịrịba ama ikike nke nnwale iji gbanwee amamihe nkịtị. Nzaghachi nke CEO ahụ dị mfe: 'Nkwubi okwu m bụ na ndị na-emepụta gị adịghị mma.' Ihe ngwọta ya bụ imekwu mgbalị iji chekwaa ngosi ihe ngosi, na ka ndị mmadụ ọhụrụ mee ya. " (Manzi 2012, 158–9)
Kedu ụdị irè bụ nchegbu nke CEO?
[ ] Iwuli na ajụjụ gara aga, were ya na ị nọ na nzukọ ebe a tụlere ihe ndị ahụ. Kedu ajụjụ anọ ị nwere ike ịjụ-otu maka ụdị ọ bụla (validation, construction, internal, and external)?
[ ] Bernedo, Ferraro, and Price (2014) mụtara Bernedo, Ferraro, and Price (2014) afọ asaa nke ihe nchekwa mmiri na-akọwa na Ferraro, Miranda, and Price (2011) (lee nọmba 4.11). N'akwụkwọ a, Bernedo na ndị ọrụ ibe ha chọkwara ịghọta usoro ahụ na-akpata mmetụta site n'ịtụle omume nke ezinụlọ ndị nwere ma ọ bụ na-akwagharị mgbe a gwọchara ya. Nke ahụ bụ, n'ụzọ dị irè, ha gbalịrị ịhụ ma ọgwụgwọ a metụtara ụlọ ma ọ bụ onye nwe ụlọ.
Gua akwukwo a, kọwaa ha, ma chịkọta ihe ha chọpụtara.
Ihe ha chọpụtara ọ na-emetụta otú ị kwesịrị isi nyochaa ọnụ ahịa nke mmemme yiri nke ahụ? Ọ bụrụ otú ahụ, gịnị mere? Ọ bụrụ na ọ bụghị, gịnị kpatara ya?
[ ] Na-esochi Schultz et al. (2007) , Schultz na ndị ọrụ ibe ha mere usoro nyocha atọ dị iche iche na mmetụta nke usoro nkọwa na njedebe na omume dị iche iche nke gburugburu ebe obibi (nhichaghari nhicha) na okpukpu abụọ (ụlọ nkwari akụ na condominium timeshare) (Schultz, Khazian, and Zaleski 2008) .
Ghota atumatu na nchoputa nke uzo ato a.
Kedụ, ọ bụrụ na ha gbanwere nkọwa nke Schultz et al. (2007) ?
[ Na nzaghachi na Schultz et al. (2007) , Canfield, Bruin, and Wong-Parodi (2016) -enweta usoro nyocha nke ụlọ nyocha iji mụọ ihe eji emepụta ego eletrik. Nke a bụ otú ha si akọwa ya na nkịtị:
"N'ime nchọpụta e mere na nyocha, onye ọ bụla nọ na ya hụrụ iwu ọkụ eletrik maka ezinụlọ nwere nnukwu eletrik ọkụ, na-ekpuchi ihe ọmụma banyere (a) iji mee ihe akụkọ, (b) na-atụgosi ndị agbata obi, na (c) iji akụkọ ihe mere eme mee ihe. Ndị na-eso ha hụrụ ụdị ihe ọmụma niile na otu n'ime usoro atọ gụnyere (a) tebụl, (b) eserese mmanya, na (c) eserese ngosi. Anyị na-akọ banyere isi nyocha atọ. Nke mbụ, ndị ahịa ghọtara ụdị nke ọkụ eletrik ọ bụla dị na ya mgbe a na-ebute ya na tebụl, ikekwe n'ihi na tebụl na-edozi ihe dị mfe ịgụ. Nke abụọ, mmasị na ebumnuche iji chekwaa ọkụ eletrik bụ ihe kasị sie ike iji mee ihe ọmụma akụkọ ihe mere eme, n'enweghị usoro. Nke ato, ndi mmadu nke nwere mmuta akwukwo ike na-aghota ihe omuma. "
N'adịghị ka ọmụmụ ọmụmụ ihe ndị ọzọ, isi ihe gbasara mmasị Canfield, Bruin, and Wong-Parodi (2016) -akọ akụkọ, ọ bụghị omume nkịtị. Kedu ihe bụ ike na adịghị ike nke ụdị ọmụmụ a na usoro nyocha ọhụụ na-akwalite nchekwa ego?
[ , ] Smith and Pell (2003) wepụtara nyocha nke satirical nke nyocha nke gosipụtara irè parachutes. Ha kwubiri:
"Dika otutu ihe eji egbochi oria na adighi ike, oganihu nke parachutes abughi ihe omuma siri ike site na iji ugwo a na-achikota. Ndị na-akwado ndị ọkachamara na-egosi na ha kwadoro ịmepụta mmemme nke a na-enyocha site n'iji data eme ihe. Anyị na-eche na onye ọ bụla nwere ike ịba uru ma ọ bụrụ na ndị ọkachamara kachasị mma nke ọgwụ ndị na-egosi na a kwadoro ma tinye aka na ndị isi abụọ, ndị na-ahụ maka ụzọ, ndị a na-etinye ebebo, na ndị na-esote ikpe nke parachute. "
Dee akwukwo nke kwesiri ide akwukwo ndi mmadu, dika New York Times , na-arumaru banyere mmekorita nke ihe omuma. Nye ihe omuma atu di iche iche. Ncheta: Lee Deaton (2010) na Bothwell et al. (2016) .
[ , , ] Nkọwa dị iche na nke dị iche iche nke mmetụta ọgwụgwọ nwere ike ịkọwa karịa ndị na-atụ aro dị iche. Dee ederede maka onye injinia na-elekọta nyocha A / B na ụlọ ọrụ mgbasa ozi mgbasa ozi na-akọwapụta uru nke mgbagwoju anya dị iche iche maka ịme ihe ntanetị n'ịntanetị. Ihe ncheta kwesiri itinye nkwuputa nke nsogbu ahu, ufodu ihe omuma banyere onodu nke ihe di iche na ihe di iche gabu nke negosi ihe ndi n'eche ihe di iche, na ihe omuma ihe di mfe.
[ , ] Gary Loveman bụ prọfesọ na Harvard Business School tupu ọ ghọọ CEO nke Harrah's, otu n'ime ụlọ ọrụ kasịnụ kasị ukwuu n'ụwa. Mgbe ọ kwagara Harrah, Loveman gbanwere ụlọ ọrụ ahụ na-eji usoro nrubeisi na-emekarị ngwa ngwa na-achịkọta ọtụtụ data gbasara àgwà ndị ahịa. N'elu usoro ihe a na-eme mgbe niile, ụlọ ọrụ ahụ malitere ịgba ọsọ. Dịka ọmụmaatụ, ha nwere ike ịnwale nyocha iji nyochaa mmetụta nke otu coupon maka ụlọ nkwari akụ efu maka ndị ahịa nwere usoro ịgba chaa chaa ụfọdụ. Nke a bụ otú Loveman si kọwaa ịdị mkpa nke nnwale na ọrụ azụmahịa nke Harrah kwa ụbọchị:
"Ọ dị ka ị naghị akpagbu ụmụ nwanyị, anaghị ezu ohi, ị ghaghị inwe otu njikwa. Nke a bụ otu n'ime ihe ị nwere ike ịkwụsị ọrụ gị na Harrah's-ọ bụghị na-achịkwa otu njikwa. " (Manzi 2012, 146)
Dee otu onye ọrụ ohuru ozi na-akọwa ihe mere Loveman ji chee na ọ dị ezigbo mkpa ịnwe otu njikwa. I kwesiri igbali ihe omuma atu-ma obu nke oma ma obu mejuputa-iji gosiputa isi ihe gi.
[ , ] Nchọpụta ọhụụ bụ iji tụlee mmetụta nke ịnata ozi ederede na ịkwado ịgba ọgwụ. Ụlọ ọgwụ dị otu narị na iri ise, onye ọ bụla nwere 600 ndị ọrịa ruru eru, dị njikere isonye. Enwere ihe dị ka $ 100 maka ụlọ ọgwụ ọ bụla ịchọrọ ịrụ ọrụ na ya, ọ na-efu $ 1 maka ozi ederede ọ bụla ịchọrọ iziga. Ọzọkwa, ụlọ ọgwụ ọ bụla ị na-arụ ọrụ ga-atụle ihe ga-esi na ya pụta (ma ọ bụ onye natara ọgwụ ịgba ọgwụ) maka n'efu. Were ya na ị nwere mmefu ego nke $ 1,000.
N'ọnọdụ ndị dị aṅaa ka ọ ga-aka mma ilekwasị anya n'ihe onwunwe gị na ọnụ ọgụgụ dị nta nke ụlọ ọgwụ na n'ọnọdụ ndị dị aṅaa ka ọ ga-aka mma ịgbasa ha n'ọtụtụ ebe?
Kedu ihe ga - ekpebi nkwụsị kacha nta na ị ga - enwe ike ịchọta na mmefu ego gị?
Dee ederede na-akọwa ihe ndị a ka ha wee nwee ike ịmalite.
[ , ] Nsogbu siri ike na usoro ntanetị bụ ihe aturu: ọtụtụ ụmụ akwụkwọ ndị na-amalite ọmụmụ na-ebido ịhapụ. Were ya na ị na-arụ ọrụ na nyocha ihuenyo n'ịntanetị, onye na-emepụta ihe na mbara ikuku echepụtala ọganihu ọhụụ nke ọ na-eche na ọ ga-enye aka igbochi ụmụ akwụkwọ ịhapụ ihe ahụ. Ịchọrọ ịnwale nmetụta nke ọganihu ọganihu na ụmụ akwụkwọ na nchịkọta dị ukwuu nke sayensị. Mgbe ị kwusịrị nsogbu ọ bụla nwere ike ibilite na nnwale ahụ, gị na ndị ọrụ ibe gị na-echegbu onwe gị na usoro ahụ nwere ike ọ gaghị enwe ụmụ akwụkwọ zuru oke iji chọpụta ihe ọganihu nke ọganihu ọganihu. N'ime ntule ndị a, ị nwere ike iche na ọkara nke ụmụ akwụkwọ ahụ ga-enweta ọganihu ọganihu na ọkara adịghị. Ọzọkwa, ị nwere ike iche na enweghi nnyonye anya. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, i nwere ike iche na ọ bụ naanị ndị natara ahụ ka ha natara ọgwụgwọ ma ọ bụ njikwa; ha emeghị ka ndị ọzọ nweta ọgwụgwọ ma ọ bụ ịchịkwa (maka nkọwa ọzọ, lee isi 8 nke Gerber and Green (2012) ). Leba anya n'echiche ọ bụla ọzọ ị na-eme.
Ka e were ya na a ga-atụle ọganihu ọganihu iji mee ka ọnụ ọgụgụ nke ụmụ akwụkwọ gụchaa klas ahụ site na pasent 1; kedu ụdị nha nke dị mkpa iji chọpụta mmetụta ahụ?
Ka e were ya na a ga-atụle ọganihu ọganihu iji mee ka ọnụ ọgụgụ ụmụ akwụkwọ gụchaa klas ahụ site pasent 10; kedu ụdị nha nke dị mkpa iji chọpụta mmetụta ahụ?
Ugbu a, were ya na ị na-agba ọsọ ahụ, na ụmụ akwụkwọ ndị gụchara akwụkwọ ihe omume niile emeela nyocha ikpeazụ. Mgbe ị jiri nyocha ikpeazụ nke ụmụ akwụkwọ ndị natara ọganihu ọganihu na ọnụ ọgụgụ nke ndị na-adịghị, ịchọtara, ọ bụ ihe ijuanya gị, na ụmụ akwụkwọ ndị na-enwetaghị ọganihu ọganihu ahụ buru ibu. Nke a ọ pụtara na ọganihu ọhụụ mere ka ụmụ akwụkwọ mụta obere? Kedu ihe ị nwere ike ịmụta site na nchọpụta ihe a? (Ntughari: Lee isi 7 nke Gerber and Green (2012) )
[ , , Cheedị na ị na-arụ ọrụ dị ka ọkà mmụta sayensị na ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ. Onye si n'ahịa ahịa na-arịọ maka enyemaka gị n'ịtụle ihe nnwale ha na-eme atụmatụ iji tụọ nlọghachi na ego (ROI) maka mgbasa ozi mgbasaozi ọhụrụ. A na-akọwa ROI dị ka uru ntanye site na mkpọsa ahụ nke ọnụahịa mkpọsa ahụ kewara. Dịka ọmụmaatụ, mkpọsa nke na-enweghị mmetụta na ahịa ga-enwe ROI nke -100%; otu mgbasa ozi ebe a na-enweta ego na-akwụ ụgwọ ga-enwe ROI nke 0; na mkpọsa ebe a na - emepụta uru na okpukpu abụọ, ọnụahịa ga - enwe ROI nke 200%.
Tupu ịmalite nchọpụta ahụ, ngalaba mgbasa ozi na-enye gị ozi ndị a dabere na nchọpụta mbụ ha (n'eziokwu, ụkpụrụ ndị a bụ ụdị nke mgbasa ozi mgbasa ozi n'ịntanetị na-akọ na Lewis na Rao (2015) ):
Ọnụ ahịa a na-ere ahịa nke onye ahịa na-esote nkesa log-nkịtị na ihe dịka $ 7 na nyocha nke ọkọlọtọ nke $ 75.
A na-atụ anya mgbasa ozi ahụ iji mụbaa ahịa site na $ 0.35 maka onye ahịa, nke dabara na mmụba nke uru $ 0.175 maka onye ahịa.
Ọnụ ọgụgụ nhazi nke nnwale ahụ bụ mmadụ 200,000: ọkara n'ime ìgwè ndị na-agwọ ọrịa na ọkara n'ime njikwa ahụ.
Ọnụahịa nke mgbasa ozi ahụ bụ $ 0.14 kwa onye otu.
Ụlọ ọrụ a na-atụ anya maka Mgbasa ahụ bụ 25% [ \_((0.175 - 0.14)/0.14\_) ]. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ngalaba ahịa na-ekwere na maka 100 dollar ọ bụla na-ere ahịa, ụlọ ọrụ ahụ ga-akwụtakwu $ 25 na uru.
Dee ederede na-atụle ihe a chọrọ. Ihe ncheta gi kwesiri iji ihe omuma sitere na nkoghari nke i meputara, o kwesiri idozi isi okwu abuo: (1) Ikwesiri ikwu ka ha kpoo nnwale a dika atumatu? Ọ bụrụ otú ahụ, gịnị mere? Ọ bụrụ na ọ bụghị, gịnị kpatara ya? Jide n'aka na ị doro anya banyere njirisi ndị ị na-eji mee mkpebi a. (2) Olee ụdị nlele ị ga-akwado maka nnwale a? Ọzọ biko jide n'aka na ị ga-edo anya banyere njirisi ndị ị na-eji mee mkpebi a.
Ezi ederede ga-aza okwu a kpọmkwem; ihe ncheta kachasị elu ga-eme ka a mara na nke a n'otu ụzọ (dịka, gosi otú mkpebi ahụ si agbanwe dịka ọrụ nke ogo nke mkpọsa ahụ); na nnukwu ederede ga-eweta ngụkọta zuru oke. Ihe ncheta gị kwesịrị iji eserese iji nyere aka gosi nsonaazụ gị.
Lee ihe atụ abụọ. Nke mbụ, ngalaba na-ere ahịa nwere ike ịnye gị ụfọdụ ozi na-enweghị isi, ha nwekwara ike ghara inye gị ụfọdụ ozi dị mkpa. Nke abụọ, ọ bụrụ na ị na-eji R, mara na ọrụ rlnorm () adịghị arụ ọrụ nke ọtụtụ ndị na-atụ anya ya.
Ọrụ a ga-enye gị aka na nchịkwa ike, ịmepụta simulations, na ịkọwapụta nsonaazụ gị site na okwu na eserese. Ọ ga-enyere gị aka ịmepụta nchịkwa ike maka ụdị nnwale ọ bụla, ọ bụghị nanị nyocha ndị e mere iji tụlee ROI. Ihe omume a na-eche na ị nwere ahụmahụ ụfọdụ na nyocha ndekọ ọnụ ọgụgụ na ike analysis. Ọ bụrụ na ị maghị njikwa ike, ana m akwado ka ị gụọ "A Primer Power" site na Cohen (1992) .
Ihe omume a sitere na RA Lewis and Rao (2015) sitere na otu akwụkwọ mara mma, nke na-egosipụta n'ụzọ doro anya njedebe nke ndekọ ọnụ ọgụgụ ọbụna nke nnwale dị ukwuu. Akwụkwọ ha-nke mbụ nwere mkpali na-akpali agụụ mmekọahụ "Na Nsochi-enweghị ike ịghachite nlọghachi na Mgbasa Ozi" - na-akọwa otú o si sie ike iji tụọ nlọghachi na ego nke mgbasa ozi n'ịntanetị, ọbụna site na nyocha dijitalụ nke ọtụtụ nde ndị ahịa. N'izu karia, RA Lewis and Rao (2015) egosiputa eziokwu di omimi nke di mkpa maka ihe omumu di iche iche di iche iche: o siri ike ikwuputa obere ogwugwu nsogbu n'agbanyeghi ihe omuma onu ogugu.
[ , ] Mee otu ihe ahụ dị ka ajụjụ gara aga, ma, kama ịme nkwekọrịta, ị ga-eji nyocha nyocha.
[ , , ] Mee otu ihe ahụ dị ka ajụjụ gara aga, mana jiri ma nyocha ma nyocha nyocha.
[ , , ] Cheedị na ịdeela ederede ahụ a kọwara n'elu, onye si na-ere ahịa na-enye otu mpempe akwụkwọ ọhụrụ: ha na-atụ anya ka mmekọrịta dị n'etiti ndị ahịa na mbụ na mgbe nnwale gasịrị. Kedu ka nke a si agbanwe mgbanwe dị na ihe ndekọ gị? (Ntughari: lee mpaghara 4.6.2 maka ihe ndị ọzọ gbasara ihe dị iche na-egosi na ihe esemokwu dị iche na-ese.)
[ , ] Iji nyochaa ịdị irè nke usoro ọrụ enyemaka nke weebụ ọhụrụ, otu mahadum na-eduzi ikpe n'etiti ndị mmadụ 10,000 ụmụ akwụkwọ na-abanye n'afọ ikpeazụ nke ụlọ akwụkwọ. A na - ezigara nnwere onwe n'efu na ozi ntinye pụrụ iche site na ikpọ oku n'ekwe ntị na 5,000 nke ụmụ akwụkwọ ndị a na - ahọpụtabeghị, ebe ndị ọzọ ụmụ akwụkwọ 5,000 nọ na njikwa ahụ ma ha enweghị ndenye aha. Ọnwa iri na abụọ mgbe nke ahụ gasịrị, nnyocha e mere na-eme (na-enweghị nkwụsị) gosipụtara na n'ime usoro ọgwụgwọ na njikwa ahụ, pasent 70 nke ụmụ akwụkwọ ahụ nwetara ọrụ oge niile na mpaghara ha (okpokoro 4.6). N'ihi ya, o yiri ka ọrụ weebụ ọ na-enweghị mmetụta ọ bụla.
Otú ọ dị, ọkà mmụta sayensị data na mahadum lere anya na data ahụ nke nta ma chọpụta na ọ bụ nanị pasent 20 nke ụmụ akwụkwọ nọ na-ahụ maka otu ịbanye na akaụntụ ahụ mgbe ha natara email. Ọzọkwa, dịka ihe ijuanya, n'etiti ndị na-abanye na weebụsaịtị ahụ, ọ bụ nanị 60% nwetara ọrụ oge nile n'ọhịa ha họọrọ, nke dị ala karịa ọnụego maka ndị na-abanyeghi na ala karịa ọnụego maka ndị mmadụ na ọnọdụ akara (okpokoro 4.7).
Nye nkọwa maka ihe nwere ike ime.
Kedu ụzọ abụọ dị iche iche iji gbakọọ mmetụta nke ọgwụgwọ a na nnwale a?
Nyere ihe a, ọ bụrụ na ọ ga-enye ụmụ akwụkwọ a ọrụ a? Naanị iji doo anya, nke a abụghị ajụjụ na azịza dị mfe.
Kedu ihe ha kwesịrị ime ọzọ?
Ihe omuma: Ajuju a kari ihe edere n'isiakwua a, ma kwue okwu ndi anwale. A na - akpọkarị ụdị mmemme a dị ka ihe agbamume iji mee ka ndị na - agụ ya gbaa ume itinye aka na ọgwụgwọ ahụ. Nsogbu a bụ ihe atụ nke ihe a na-akpọ nkwenye nke otu aka (lee isi 5 nke Gerber and Green (2012) ).
[ ] Mgbe o nwesịrị nyochaa ọzọ, ọ pụtara na nnwale ahụ a kọwara na ajụjụ gara aga bụ ọbụna ihe mgbagwoju anya karị. O wee pụta na pasent 10 nke ndị nọ na-achịkwa kwụrụ ụgwọ maka ịnweta ọrụ, ha jikwa ụgwọ ọrụ dị 65% (tebụl 4.8).
Dee ozi na-achikota ihe ị chere na-eme ma kwadoro usoro ihe omume.
Ihe omuma: Ajuju a kari ihe edere n'isiakwua a, ma kwue okwu ndi anwale. Nsogbu a bụ ihe atụ nke ihe a na-akpọ nkwenye abụọ (lee isi 6 nke Gerber and Green (2012) ).
Isiokwu 4.6: Ntụle Dị Mfe nke Data sitere na Nlekọta Ọrụ Ọrụ
Ọnụ ọgụgụ ọrụ
O doro anya na ịnweta weebụsaịtị 5,000 70%
Enweghị ohere ịnweta weebụsaịtị 5,000 70%
Isiokwu nke 4.7: Nyocha zuru ezu banyere data site na nlekọta ọrụ nlekọta
Ikwenye na ịnweta weebụsaịtị ma banye 1,000 60%
Ikwenye na ịnweta weebụsaịtị ma abanyeghi 4,000 72.5%
Isiokwu nke 4.8: Nyocha zuru ezu nke data sitere na Nlekọta Ọrụ Ọrụ
Enweghị ohere ịbanye na weebụsaịtị ma kwụọ ụgwọ maka ya 500 65%
Enweghị ohere ịnweta weebụsaịtị ma ghara ịkwụ ụgwọ maka ya 4,500 70.56%